eNasha.com - गुरुकूलबाट छुट्टिएपछि...
प्रख्यात नाटक प्रशिक्षण केन्द्र गुरुकूलमा नाट्य विधा सिकिसकेपछि स्वतन्त्र रुपमा केही गरौँ भन्ने भावना भएका सात युवाहरुले शिल्पी नामक नाट्य समूह स्थापना गरेका छन् ।
सिर्जना भनेको मनोरञ्जन मात्र होइन, यसले सामाजिक सान्दर्भिकता र सापेक्षता बोकेको हुनर्ुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्दै यो समूहले हालै मात्र 'तराइ मधेश नाटक यात्रा' सम्पन्न गरेको थियो । जसमा तराइमा रहेको सौहाद्रता, एकअर्काबीचको सद्भाव र अहिले पछिल्लो समयमा उदय भइरहेको असन्तोषका कुरालाई उठाइएको थियो ।
"हामीले राजधानीबाट गएर त्यहाँका जनतालाई हाम्रा विचार लाद्न खोजेनौँ", नाटकका संयोजक युवराज घिमिरेले भने- "हामीले नाटकबाट तराइ-मधेशका समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्‍यौँ । त्यहाँ मौलाइरहेको असन्तोष, हठवादिता र अवसरवादितालाई पनि देखायौँ तर त्यसको अन्त्य कसरी गरिनर्ुपर्छ भनेर त्यहीँका दर्शकलाई सोध्यौँ । र, रोचक कुरा- सबैले राम्रो भएको नै हर्ेन चाहे ।"
नेपालमा रंगमञ्च लामो समयदेखि समाजको अभिन्न अंगको रुपमा रहँदै आएको छ । तर नेपालमा यो विधाले छुट्टै सम्मानित स्वरुप पाउन थालेको धेरै भएको छैन । शिल्पीले यो सम्मानलाई अझ घनिभूत बनाउन चाहिरहेको घिमिरेको कथन छ ।
घिमिरे भन्छन्- "हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि कलात्मक नाटकको नियमित मञ्चन गर्र्छौँ । त्यसैगरी रंगमञ्चका अन्य आयामहरु सडक नाटक, कचहरी नाटक र नयाँ सिर्जनाहरु हाम्रा नियमित काम हुन् । यसका लागि हामी देश तथा विदेशका नाटककारहरुका नाटक तथा कृति मञ्चन गर्र्छौँ । कलात्मक नाटकलाई आवश्यक पर्ने अन्य क्रियाकलापहरु, कार्यशाला, प्रशिक्षण तथा विदेशी रंगकर्मीहरुसँगको साझेदारी तथा सहकार्य पनि हामी गर्नेछौँ ।"
रंगमञ्चको मूल आधार संस्कृति हो । शिल्पीले स्थानीय तथा लोक संस्कृतिलाई आफ्नो रंगमञ्चीय कर्ममा समेटिरहेको छ । सांस्कृतिक जगर्ेना तथा यसको परिमार्जनका लागि त्यस्ता सांस्कृतिक तत्वहरुलाई शिल्पीले नाटकमा मिसाएर प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
शिल्पीले नाटकहरु उत्पादन मात्र नगरी दक्ष रंगकर्मीहरुको पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा दक्ष रंगकलाकारको अभाव महसूस गरी यस्तो योजना बनाएको हो । जसमा नयाँ पुस्ताका रंगकर्मीहरुलाई स्थानीय र विदेशका कुशल प्रशिक्षकहरुबाट नाट्य प्रशिक्षण दिइने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अहिले सबै कुरा आर्थिक क्षेत्रसँग गाँसिएको छ । उद्देश्य उँचो भए पनि अर्थका अभावमा ती पूरा हुन सक्तैनन् । तर यिनीहरु पनि चूप लागेर बसेका छैनन् । गर्मी याममा र्सवसाधारणहरुको समस्या बनेको मलेरिया र अन्य गर्मीका रोगहरु विरुद्ध लड्का लागि अहिलेदेखि नै दौडधूपमा लागेका छन् । कोही यसको नाटक तयार पार्दैछन् भने कोही मार्केटिङ गर्दैछन् ।
क्या बात ! यो पो त जागरुकता !!